Ogaden News Agency (ONA) – Taliska Wayaanaha oo Jaray Khadkii Internet-ka Ee Gobolka Axmaarada.
Taliska Wayaanaha oo Jaray Khadkii Internet-ka Ee Gobolka Axmaarada.
Posted by Dulmane	/ January 29, 2018
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in xukuumada wayaanuhu ay gabi ahaanba jartay khadkii Internet-ka ee Gobolka Axmaarada ee woqooyiga Itoobiya.
Sida xogta aan kuhelayno Gobolka Axmaarada ayaa kujira maalintii labaad oo khadku uu ka maqanyahay, arintan ayaa timid kadib markii rabshado isdaba joog ah ay Gobolka kadhacayeen maalmihii lasoo dhaafay, kuwaas oo galaaftay nolosha dad badan oo shacab.
Warka ayaa intaas kudaraya in xukuumada wayaanuhu ay doonayso in aan xogo aad ubadan laga helin Gobolka Axmaarada oo todobaadkan ay shacabku qabsadeen 4 magaalo oo muhiim ah isla markaana ay kasiidaayeen maxaabiis badan oo gumaysiga uxidhnaa.
Kooxda fashilantay ee TPLF ayaa Internet-ka u aragtay aqabada koobaad ee hortaagan, waxayna kooxdu aaladan u aragtaa mida suuragalisay in uu kacdoonku wadanka kasii socdo mudada labada sano ah, taas oo keentay in ay kooxdu ladagaalanto Internet-ka.
Taliska wayaanaha oo dhowr jeer oo hore isku dayay isku day noocan oo kale ah ayaa lasheegayaa in uu khasaariyay malaayiin lacag ah waxaana lasheegay in maalintiiba ay xukuumadu khasaarto 32 milyan oo Dooller.
Dhinaca kale dadka kacdoon wadayaasha ah ayaa sheegay in aysan dan kalahayn hadii khadka laxidho iyo hadii kalaba waxayna sheegeen in ay howlahooda caadi usii wadan doonaan markasta iyo sikastaba.